China Welded Wire orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Welding tariby er70s-6 ampiharina amin'ny welding vy karbaona sy 500 MPa kilasy ambany-firaka vy.Nampiasaina be dia be tamin'ny karazana sehatra rehetra.Toy ny indostrian'ny fiara, ny famokarana milina fananganana, ny fanamboaran-tsambo, ny famokarana fitaovana metallurgique, ny tetezana, ny asa sivily, ny indostrian'ny petrochenika, ny sambo fanerena ny boiler, ny lokomotif, sns.
Akora:Mild vy / vy karbonina / vy tariby
Kely ny tsipìka.
Welding arc fahamarinan-toerana.
Endriky ny welding tsara tarehy.
Fahombiazana fametrahana tsara.
15kg/spool, spool plastika tsirairay feno baoritra, baoritra 72/pallet, ary pallets 20 feno ao anaty fitoeran-javatra 20 feet
20kg/spool, spool plastika tsirairay feno baoritra, baoritra 66/pallet, ary pallets 20 feno ao anaty fitoeran-javatra 20 feet
250kg / amponga, amponga 4 / pallet, ary pallet 20 feno ao anaty kaontenera 20 feet
teo aloha: Wire Mesh Bird Cage
Manaraka: Screw drywall